Impilo Yasemaphandleni yamaTswana
Izindawo Zokuhlala Ezivamile
Izindawo zokuhlala zase-Tswana azivamile kakhulu eningizimu ye-Afrika ngobukhulu bawo obukhulu kodwa obuhlanganisiwe, okubangela, okungenani ingxenye, yemvelo yabo eyomile. Ngempela ngasekuqaleni kwekhulu le-19 leminyaka, izindawo ezithile zaseTswana, ezazigxile kwezinye izizathu zokuzivikela, zabaningi kuneCape Town, idolobha elikhulu kunazo zonke laseNingizimu Afrika lalokholoni ngaleso sikhathi.
Esikhathini esidlule kwakungeyona into engavamile ukuba wonke amalungu esizwe afakwe emkhakheni owawuzungeza induna. Ezinye izinduna zeza ukuzohlala ezindaweni eziseduze, ngokusebenzisa ukunqotshwa kwensimu kanye nokwakhiwa kwemikhawulo yabantu abaningi abalethwa ngaphansi kokubusa kwabo.
Indlu, eneziko zombili kanye nokubaluleka kwekhaya, iyunithi encane kakhulu yomphakathi, ngokuvamile indoda, umkayo nezingane ezingashadile, kodwa ngokuvamile ihlanganisa namadodana ashadile, ngisho namadodakazi, abashade nabo nezingane. Izindlu zasendlini zinezindlu noma izindlu eyodwa noma ngaphezulu egcekeni elizungezwe umhlanga noma ucingo lwokhuni, noma udonga lwasemhlabathini. Umbhangqwana oshadile uvame ukuhlanganyela indlu nezingane ezincane.
Izingane ezisencane zowesilisa bobabili zabelana ngendlu, futhi abantu abadala abangashadile bahlukaniswa ubulili. Izindlu zazisetshenziselwa ukulala nokugcina, ukupheka nezenzo zomphakathi ezenzeka egcekeni elivulekile. Eminyakeni eyadlula, amalungu omndeni akha indlu yawo siqu futhi ahlinzeka ukudla okuningi. Izwe, imfuyo, nayo yonke impahla yayikelwe yinhloko yendlu eyabanika labo abaxhomeke kuyo.
Njengenhloko yeqembu elifuywayo, wayelindele ukulalela, ukukhonza, nokuhlonipha emkhatsini wabafazi bakhe nezingane, futhi wabhekana nazo zonke izenzo zomthetho nabangaphandle. Umthandazo nomhlatshelo, okwenzelwe umndeni kumadlozi, kwakunomthwalo wemfanelo wakhe, nakuba yena wafuna usizo lwabantu abadala nakwezinye izizwe eminye imizi.